सुगर मिल बन्दको संकेत
गत केही वर्षदेखि घाटामा गइरहेको रौतहटमा सञ्चालित श्रीराम सुगर मिल्स कोरोनाको कारण देखाउँदै सधैंका लागि बन्द गर्न निर्णयमा पुगेको छ । मिल्सले अत्यधिक घाटा भएको र उद्योग चलाउने वातावरण नभएको भन्दै उद्योग बन्द गर्न बाध्य भएको सूचना सरकारी निकायहरूलाई समेत दिएको छ । एउटा कम्पनी बन्द हुनु सामान्य भए पनि नेपालको सन्दर्भमा यो घटनाका निकै अर्थ लाग्ने र विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
कृषिप्रधान मुलुकमा कृषि उद्योग नै बन्द हुने अवस्था आउँदा नयाँ लगानी निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।
विगत २ दशकदेखि सञ्चालनमा आएको उद्योगले शुरूमा राम्रै मुनाफा कमाएको देखिन्छ । तर, पछिल्ला केही वर्षमा भने कम्पनी निरन्तर घाटामा गएको छ । उद्योगको कुल घाटा २ अर्ब १७ करोड पुगेपछि बन्द गर्न बाध्य भएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यसमा उखु किसानहरूलाई तिर्न बाँकी करोडौं रुपैयाँ पनि जोडिएको छ । कम्पनीले चलअचल सम्पत्ति विक्री गरेर पनि बाँकीबक्यौता तिर्ने बताएको छ । यसरी कम्पनी बन्द हुँदा निकै प्रश्न उठेका छन् ।
पहिलो, नेपालका चिनी उद्योगको भविष्यमा प्रश्न उठेको छ । धेरै चिनी मिलले चिनी विक्री नभएको, मुनाफा नभएको भन्दै उखु किसानलाई उखुको मूल्य तिरेका छैनन् । सरकारले भुक्तानी गर्न दबाब दिएर मिति तोके पनि थोरैले मात्रै भुक्तानी दिएका छन् । गतवर्षको यो विवादमा एकातिर उखु किसानले रुँदै धर्ना दिएका थिए भने चिनी मिलका सञ्चालकहरू पनि रुँदै आफ्नो समस्या सुनाइरहेका थिए । तर, यी दुवै पक्षको समस्या सम्बोधन गर्न सरकार चुक्नुको परिणति हो, चिनी मिल बन्द हुनु । अन्य चिनी मिल पनि बन्द भए भने उखु किसानको समस्या झनै भयावह हुनेछ ।
दोस्रो, चिनी मिल कोरोनाका कारण समस्यामा परेको होइन तर यही कारण देखाएर बन्द गरिएको छ । यसले गलत नजीर स्थापना गर्न सक्छ । विभिन्न कारणले उद्योगी र कामदारबीच समस्या भएका अन्य कम्पनी पनि यसै गरी बन्द गर्ने गलत परम्परा स्थापित भयो भने औद्योगिक विकासको यात्रामा धक्का लाग्नेछ ।
तेस्रो, उत्पादनमूलक उद्योग खुल्ने क्रम तीव्र नबनेको, उद्योग खोल्नुभन्दा व्यापार गर्नतिर व्यावसायिक घरानाहरू सक्रिय भइरहेको अवस्थामा यो मिल बन्द हुँदा औद्योगिक उत्पादन झनै घट्ने सम्भावना हुन्छ । चिनी उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गरेर विक्री गर्न बढी फाइदा हुने भएपछि उद्योग चलाउने टन्टा कसले बोकोस् ?
चौथो, श्रीराम सुगर मिल्स कम्पनी पूरै बन्द भएको हो कि उत्पादन बन्द भएको हो, सूचनाले स्पष्ट पार्दैन । सूचनाले ‘कम्पनी सञ्चालन गर्न अनुकूलता नभएसम्म उद्योग स्थायी रूपमा सदाका लागि बन्द’ भन्ने जानकारी दिन्छ । तर, कुनै पनि कम्पनी बन्द गर्न कानूनले त्यति सजिलो बाटो दिएको छैन । कम्पनी बन्द गर्ने हो भने कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ, लिक्वीडेटरको नियुक्ति गर्नुपर्छ । यी कुरा सूचनामा खुलाइएको छैन । त्यसैले कम्पनीले उत्पादन बन्द गरेको हो वा कम्पनी नै खारेज गर्न आ“टेको हो, स्पष्ट छैन । यद्यपि कम्पनीले चलअचल सम्पत्ति विक्री गरी बाँकीबक्यौता तिर्ने र यसका लागि सरकारी अनुमति लिने प्रक्रिया शुरू गरेको बताएको छ ।
पाँचाैं, शेयरबजारमा उत्पादनमूलक कम्पनीलाई प्रवेश गराउन निकै प्रयास भइरहेको छ । रू. १०० को यो कम्पनीको शेयरबजारमा सोमवार मात्रै रू. ३३८ रुपैयाँमा कारोबार भयो । कम्पनीले ३ सय प्रतिशत हकप्रदका लागि दिएका आवेदन थन्किएर बसेको छ । उत्पादनमूलक कम्पनी शेयरबजारमा प्रवेश गराउने विषयमा यसले नकारात्मक सन्देश दिने देखिन्छ ।
कुनै पनि उद्योग बन्द हुनु अर्थतन्त्रका लागि खराब संकेत हो । त्यसमा पनि कृषिप्रधान मुलुकमा कृषि उद्योग नै बन्द हुने अवस्था आउँदा नयाँ लगानी निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । कसैले उद्योग बन्द गर्छु भन्दा त्यसका लागि बाटो खुला गरिदिनुपर्छ तर त्यसमा निश्चित कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्छ । श्रीराम सुगर मिल्सले त्यो प्रक्रिया पूरा गरेको छैन, त्यसमा गलत आशय लुकेको छ भने त्यसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।